सहारा क्लब बन्यो असहायहरुको सहारा, बाँड्यो राहत सामाग्री – Sahara Club Pokhara
पोखरा, कोभिड १९ संगै महामारी बाट जोगिन यति बेला नेपाल लकडाउनमा छ । लकडाउनको १० औं दिन चलिरहँदा विशेष गरि ज्याला मजदुरी गर्नेहरुको छाक टार्न यति बेला हम्मे हम्मे नै छ । तिनै असहायहरुको सहारा बनेको छ यति बेला सहारा क्लव पोखरा ।
“चार दिन भयो राहत सामाग्री सहारा क्लवले बाँडन थालेको” सहारा क्लवका कोषाध्यक्ष राजुलालचनले भने । “क्लवका अध्यक्ष केशव बहादुर थापाज्यू संग समन्वय गरि हामीले राहत बाँडेका हौं ।” उनले भने । उनले करिव ९० हजार बराबरको राहत सामाग्री वितरण गरेको जानकारी दिए ।
पोखरा ९ स्थित पार्वती टोल, गणतन्त्र टोल, शिव टोल, कृष्ण टोल र सहारा टोलमा यस्तो राहत सामाग्री वितरण गरेको लालचनल् सुनाए । पोखराको यि टोलहरु सुकुम्वासी बस्तीको रुपमा समेत परिचित छ । जहाँ अशँख्य दैनिक ज्यालामजदुरी, भरिया र निम्न वर्गका जनमानसहरुको बसोवास छ ।
यि चार टोलका १०९ घरका ३२९ परिवारका सदस्यलाई एक साताका लागि पुग्ने चामल, दाल, नुन, तेल वितरण गरेको लालचनले जानकारी दिए । “लकडाउनको समय छ बाहिर निस्कन समेत अप्ठ्यारो छ” उनले भने–“यसको वितरणको सबै जिम्मा सहकोषाध्यक्ष बिनु राना मगर र उनको बुवा प्रकाश रानाको सहयोगमा वितरण गर्यौ ।”
राज्यको राहत सामाग्रीको प्रतिक्षामा रहेका नागरिकका लागि सहारा क्लव पोखराले गरेको यो कार्य निकै सर्हानिय र प्रशंसनिय रहेको छ ।
Featured March 30 @ 11:00 am - April 10 @ 5:00 pm
19th Aaha! Rara Gold Cup 2021
सहारा यूकेको तर्फबाट आहा ! रारा गोल्डकपका लागि...